कुस्मा बजारको टोलटोलमा प्रहरी अभियान : फलेवास चौकीमा पुग्ने सडक निर्माण ! – ebaglung.com
कुस्मा बजारको टोलटोलमा प्रहरी अभियान : फलेवास चौकीमा पुग्ने सडक निर्माण !
२०७५ असार ९, शनिबार १७:१६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
निर्मल पौडेल, (एन पि घायल) पर्वत २०७५ असार ९ । कुस्मा बजारको टोलटोलमा प्रहरी अभियान कार्यक्रम अन्र्तगत कुस्माको वान्द्रेवेणी चौरमा सामुदायिक प्रहरी सेवाकेन्द्र शिवालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वत र वजारचौकीले सचेतनामुलक संयुक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरका छन् ।
शनिवार विहान कुस्मा नगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयको सकृयतामा टोल एरियाको वस्तुस्थितिको वारेमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । सवारी दुर्घटना,न्यायको लागि सचेतना तथा नागरिकले दिएका जनगुनासाका सुझाव र जनचेतनामा अभिवृद्धि ल्याउने सुझाव प्रदान गर्ने लगायतका यावत विषयमा छलफल गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र शिवालयकी इन्चार्ज पुर्णिमा थापाले आफ्नो पेशाप्रति इमान्दारीताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आम नागरीकहरुलाई सुझाव दिँदै जनचेतना अभिवृद्धि गराउन प्रहरी सदासर्वदा जनताको साथमा रहेको वताईन् । कार्यक्रममा प्रहरी सहायक निरिक्षक धु्रव वहादुर वोहोराले वडा नं ६ को टोल एरीयाको वारेमा जानकारी दिँदै आवश्यक निर्देशन दिएका थिए । जिल्ला ट्राफिक हवल्दार काशीनाथ चौधरीले सडक प्रयोग गर्दा यात्रुहरुले अपनाउनुपर्ने सावधानी र दुर्घटना न्युनिकरण कसरी कम गर्ने भन्ने वारेमा प्रष्ट पारेका थिए । त्यस्तै कु.न.पा. ६ कार्यपालिका सदस्य सुमित्रा पौडेलले आयोजना गरिएको कार्यक्रमले जनमानसमा चेतना जागेर आगामी दिनमा कुनैपनि कार्यमा लापरवाही हुन नदिने र सुरक्षित समाजको निर्माण होस भन्ने हेतुले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिएकी थिईन ।
सामुदायिक प्रहरीले नमुना वमोजिमको पर्चा र पक्पलेट वितरण गर्दै सम्पन्न कार्यक्रममा वडा प्रतिनिधिहरु,जनकल्याण आमा समुहका पदाधिकारीहरु, होटल व्यावसायीहरु, शिक्षक नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु लगायत करिव ३५ जनाको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रम कु.न.पा. ६ की कार्यपालिका सदस्य सुमित्रा शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
यसैवीच वर्षौ देखि स्थानियहरुविच जग्गामा भएको विवादले अलपत्र फलेवास प्रहरी चौकी सम्म लैजाने भनेर खनिएको वाटो रुट परिवर्तन गरेर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । फलेवास नगरपालिका ६ देविस्थानमा अवस्थित प्रहरी चौकी सम्म लैजाने नयाँ ट्रयाक प्रहरीकै सकृयतामा खोलिएको हो । ३ लाख ३ हजारको लागतमा निर्माण गरिएको मोटरवाटो स्थानियको चन्दा संकलन वाट रु १ लाख ५३ हजार र फ.न.पा. कार्यलयको १ लाख ५० हजार सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । हालसालै निर्माण गरिएको वाटो १ सय ४० मिटर लामो र ६ मिटर चौडाई रहेको छ ।
चौकी प्रमुख माधव पन्तका अनुसार पहिले सिमलको वोटको फेदहुँदै वाटो ल्याउने भनेर शुरुवात भएको थियो तर स्थानियले जग्गामा निकालेको विवादका कारण विचमै रोकिएको थियो । पछी त्यै खनिएको वाटोमा पनि टहरा निर्माण र वार वन्देज भएपछि चौकी सम्म आउन जान निकै समस्या भएको थियो । अहिले चौकी सम्म आवतजावत गर्न सर्वसाधारण र प्रहरीलाई सहज भएको छ । पन्तले भने “वर्षौ देखिको वाटोमा भएको फाटो मिलाइयो ।”
स्थानिय समाजसेवी तथा मोटरवाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले प्रहरी चौकी संगको पुर्व सहमति अनुसार जग्गा निशुल्क प्रदान गरिएपछि अन्य आर्थिक स्रोत खोजर वाटो निर्माण गरिएको हो । चौकी सम्म आउन जान साह्रै समस्या देखेर आँफुले निशुल्क जग्गा संगै निकासा दिएको श्रेष्ठले वताए । उनले भने “मर्दाको दिन लैजाने केहि होइन कति समस्या हेरिरहनु भनेरनै जग्गा प्रदान गरेको हुँ ” श्रेष्ठले चौकीलाई मात्र होइन धेरै सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । प्रहरी चौकीका अनुसार वाटो अहिल्यै सवै सोलिङ गर्ने र पछी पिच गर्ने वताएको छ । सोलिङ निर्माण कार्य यतिवेला तिव्र रुपमा भइरहेको छ । वाटो निर्माण संगै चेकजाँचमा समातिएका मोटरसाइकल गाडीहरु समेत अरुको जग्गामा राख्नुपर्ने समस्या हटेको छ भने अफिसका गाडीहरु समेत आवजजावत गर्न सहज भएको छ । त्यस्तै पन्त फलेवासमा सरुवा भएरसंगै जनताको शान्ति सुरक्ष ा अमनचैनको राहत मिलेको स्थानिएको भनाई छ ।
गल्कोट समाज जापानको पाचौं अधिवेशन जुलाइ ३१ मा टोकियोमा हुने
बडीगाडमा तरुणदलको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न